သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ မင်းသား ၃ ယောက်တို့ အပြိုင်ကျဲထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်ရဲ့ နမူနာ - Cele Platform
သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ မင်းသား ၃ ယောက်တို့ အပြိုင်ကျဲထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်ရဲ့ နမူနာ
September 12, 2019 Kyaw Kyaw Celebrities 0
ပရိသတ်ရဲ့ အားပေးမှုတွေကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ချက်တွေနဲ့ အနုပညာလောကမှာ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကို ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကိုလည်း ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
“ဘယ်သူလဲ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့အတူ ပိုင်တံခွန်၊ချမ်းမင်းရဲထွဋ်နဲ့ နေလင်းရှိန်းတို့ သုံးယောက်က အတူတွဲဖက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ကောင်လေးသုံးယောက်လုံးရဲ့ သဘောကျခြင်းကို ခံနေရတဲ့ မမအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထွေလာနဲ့ ပရိသတ်တွေကို စိတ်လှုပ်ရှားမှုပေးနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။
▶️▶️▶️ပိုင်တံခွန်၊ ချမ်းမင်းရဲထွဋ် ၊ နေလင်းရှိန်း တို့ (၃)ယောက်နှင့် မတ်မတ်သင်ဇာဝင့်ကျော် ဆုံစည်းမှု…… 🔺🔺🔺🔺➡️➡️➡️ ( ၃)ယောက်စလုံးကလည်း မတ်မတ်သင်ဇာ ကိုချစ်တယ်… မတ်မတ်သင်ဇာ ကလည်း (၃)ယောက်စလုံးကို ချစ်နေပြန်တယ်….. 🔺🔺🔺👁👁👁👁 ဒါ့အပြင် ကျွန်မ အနားမှာ တစ်ချိန်လုံး ရှိနေတဲ့ အရိပ်တစ်ခု… 👀👀👀➡️➡️➡️ အဲ့ဒါ …. ဘယ်သူလဲ ? (၃)ယောက်ထဲက တယောက်လာ (ဒါမှမဟုတ် ) တခြားတစ်ယောက်လား ???? ➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေါအထိ Sky Net Cinema မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ….
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကိုတော့ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့အထိ Sky Net Cinema မှာ ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရော မတ်မတ် သင်ဇာနဲ့ ပိုင်တံခွန်၊ချမ်းမင်းရဲထွဋ်၊ နေလင်းရှိန်း တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “ဘယ်သူလဲ” ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်ဖို့ အဆင်သင့်ပဲလား…
ပရိသတျရဲ့ အားပေးမှုတှကေို အခိုငျအမာ ရရှိထားတဲ့သူတဈယောကျဖွဈတဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ သူမရဲ့ ကိုယျပိုငျရပျတညျခကျြတှနေဲ့ အနုပညာလောကမှာ လြှောကျလှမျးနတေဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှကေို ဆကျတိုကျရိုကျကူးနတေဲ့သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ မကွာခငျမှာတော့ သငျဇာဝငျ့ကြျောရဲ့ ဇာတျလမျးတှဲအသဈကိုလညျး ပရိသတျတှေ ကွညျ့ရတော့မှာဖွဈပါတယျ။
“ဘယျသူလဲ” ဆိုတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲမှာတော့ သငျဇာဝငျ့ကြျောနဲ့အတူ ပိုငျတံခှနျ၊ခမျြးမငျးရဲထှဋျနဲ့ နလေငျးရှိနျးတို့ သုံးယောကျက အတူတှဲဖကျပွီး သရုပျဆောငျထားကွတာဖွဈပါတယျ။ သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ ဒီဇာတျလမျးတှဲထဲမှာ ကောငျလေးသုံးယောကျလုံးရဲ့ သဘောကခြွငျးကို ခံနရေတဲ့ မမအဖွဈသရုပျဆောငျထားတာဖွဈပါတယျ။ ထှလောနဲ့ ပရိသတျတှကေို စိတျလှုပျရှားမှုပေးနိုငျတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲလညျးဖွဈပါတယျ။
▶️▶️▶️ပိုငျတံခှနျ၊ ခမျြးမငျးရဲထှဋျ ၊ နလေငျးရှိနျး တို့ (၃)ယောကျနှငျ့ မတျမတျသငျဇာဝငျ့ကြျော ဆုံစညျးမှု…… 🔺🔺🔺🔺➡️➡️➡️ ( ၃)ယောကျစလုံးကလညျး မတျမတျသငျဇာ ကိုခဈြတယျ… မတျမတျသငျဇာ ကလညျး (၃)ယောကျစလုံးကို ခဈြနပွေနျတယျ….. 🔺🔺🔺👁👁👁👁 ဒါ့အပွငျ ကြှနျမ အနားမှာ တဈခြိနျလုံး ရှိနတေဲ့ အရိပျတဈခု… 👀👀👀➡️➡️➡️ အဲ့ဒါ …. ဘယျသူလဲ ? (၃)ယောကျထဲက တယောကျလာ (ဒါမှမဟုတျ ) တခွားတဈယောကျလား ???? ➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️ စကျတငျဘာ ၁၃ ရကျနမှေ့ စကျတငျဘာ ၁၉ ရကျနေါအထိ Sky Net Cinema မှာ ကွညျ့ရှုနိုငျပါပွီ….
ဒီဇာတျလမျးတှဲကိုတော့ စကျတငျဘာ ၁၃ ရကျနမှေ့ စကျတငျဘာ ၁၉ ရကျနအေ့ထိ Sky Net Cinema မှာ ပွသမှာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှရေော မတျမတျ သငျဇာနဲ့ ပိုငျတံခှနျ၊ခမျြးမငျးရဲထှဋျ၊ နလေငျးရှိနျး တို့ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ “ဘယျသူလဲ” ဇာတျလမျးတှဲကို ကွညျ့ဖို့ အဆငျသငျ့ပဲလား…
ဖက်ရှင်ကျကျ တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီလှနေတဲ့ မိသားစုပုံလေးတွေကို မျှဝေလာတဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်
နီနီရဲရဲ မြန်မာဖက်ရှင်လေးနဲ့ ယဉ်ယဉ်လေးလှနေတဲ့ ဘေဘီမောင်